नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अर्काको आङको जुम्रामाथी लाखौं उखान टुक्का फुराउने दिमागले पनि ,आफ्नो आङको चाहिँ भैंसी पनि नदेख्दो रहेछ !
अर्काको आङको जुम्रामाथी लाखौं उखान टुक्का फुराउने दिमागले पनि ,आफ्नो आङको चाहिँ भैंसी पनि नदेख्दो रहेछ !
म पनि जातले मान्छे ! जातले मान्छे भएर जन्मेपछि कहिलेकाही नुहाउनै पर्ने बाध्यता हुने रहेछ । बाख्रो जस्तो
आजिवन ननुहाई बस्न नमिल्ने ! अब बसाई काठमाडौंको छ । जाडो बढेको छ , पानी छोइसक्नु छैन । २३ कार्तिकमा भाईटिका थियो क्यारे । करले त्यो दिन नुहाईएको थियो । त्यसयता उस्तो कष्ट गरिएन नै भनम्न । मन सफा हुनुपर्छ भन्ने दर्शनको साहारा लिईयो । तर हिजो बुढीले भुइँमा ओछ्यान लगाई दिएपछि भने, दर्शनले काम गरेन । नुहाउनै पर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यस्ता जाडोमा जोईको अंगालो छोडेर भुईमा एक्लै सुत्ने हिम्मत आएन । त्यसैले ,आज बिहानै ज्यान जोखिममा राखेर भएपनि लघु स्नान गरियो । कुरो यहाँसम्म त ठिकै थियो । तर लघु स्नान सकेर, बश्त्र धारण गरि नसक्दै,आफुले गरेको बिरगाथा कस्लाई सुनाउ, कस्लाई सुनाउ भएर आयो । भ्याट्टै नुहाएको तस्बिर राष्ट्रिय दैनिक र बिजुलीका पोल/पोलमा झुन्ड्याउन पनि अलि नसुहाउदो हुने । स्टाटस बनाई बनाई नुहाएको प्रचार गर्न पनि मनासिब नहुने ! फेरि कतै न कतै त जानकारी गराउनै पाए हुने जस्तो भएको छ आफुलाई । कस्लाई सुनाउ / कस्लाई सुनाउ भएर भित्रैबाट स्याँउ स्याँउ किरा परेजस्तो भको छ । चुप लागेर बस्न सक्ने स्थित नै छैन । अनि तल ओर्लिएर दुईचार जना सटरवाला छिमेकीलाई – ” सारै चिसो पानी,नुहाएको झन्डै मरिएन ” भन्दै सुनाईयो । यति भनेपछि बल्ल हाईसन्चो भयो र ज्यान पनि तात्न थालेर जाडो भाग्यो ।
मान्छे नाथुको जातलाई आफुले गरेका सानातिना काम पनि कम्ता महान लागेर आउदैनन भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो । हुनत यो मेरो निजि अनुभव हो तरपनि हाम्रो राष्ट्रिय जिबनमा यस्ता घट्ना जतासुकै देखिएका छन । जाबो जाडोमा नुहाईयो भने त कल्लाई सुनाउ, कल्लाई सुनाउ हुने मान्छेको जातलाई , यसो सानातिना काम, काम परै छोड्नुस , काम गर्ने सोच मात्रै आयो भनेपनी डंका नपिटि हुँदैन ।
अब यो देश नै बिचित्रका प्रतिभाहरुको देश हो भन्दा फरक पर्दैन । यो पटक मात्रै होईन, उल्का उल्का सोच र बिचित्र कल्पनाशीलता भएकाहरू यहाँ सधैं दुईतिहाईमै हुन्छ्न । सगरमाथामा म्याराथन गराउने देखि रारा तालमा पैडी प्रतियोगिता गराउने उखर्माउलो सृजनशीलता भएका बायुहरु कतै जन्मिन नपाएर यहि जन्मिन आइपुग्छ्न । काकाकुलीको बस्तीमा पर्तिर मेलम्चीको पानी ल्याउन चौथाई शताब्दी लगाउने तर रेल र सेटेलाईट , स्विजैरलैंड र पानी जहाजको सपना देख्ने र देखाउनेहरु छानी छानी यतै जन्मिन्छ्न । अनि यीनका नबिनतम सोचहरु पोल/ पोलमा झुन्डिन्छ्न । जस्ले उ जस्तै प्रतिभा धेरै भएर उकुसमुकुस भएका प्रतिभावानहरुलाई प्रेरित गर्छ । अनि ती पनि उल्ला उल्का गर्नतिर लाग्छ्न । कोहि चौबीस घन्टा नाचेर भएर नि प्रतिभा प्रदर्शन गर्छ्न । कोहि जिब्रोले तालु छोएर प्रतिभा प्रदर्शन गर्छन । कोहि आईडिया फ्याक्छ्न । कोहि उड्न्ते भाषण छापेर दार्शनिक हुन खोज्छ्न । अर्थात जे जसरी होस, यहाँ दुईतिहाई दिने देखि दुईतिहाई पुर्याउने सबैलाई महान हुनु छ । भाईरल र फेमस हुनु छ ।
वास्तवमा यो देश नै फेमस र भाईरलहरुको देश हो । दार्शनिक र कविहरुको देश हो । गजलकार र मुक्तककारहरुको देश हो । गिनिज रेकर्डधारीहरुको देश हो भनम्न ! त्यसैले यहाँ को भन्दा को धेरै भाईरल, को भन्दा को फेमस भनेर दौड र भोटिङ चलिरहन्छ । जुलुस निस्किरहन्छ । हस्ताक्षर संकलन भइ रहन्छ । यस्तो बिचित्रको मुकुन्देल्याण्डमा मार्का मार्काका प्रतिभाहरु आपसमा दौडिएर एकाअर्कालाई जित्न खोजीरहेका हुन्छ्न ।
फेरि यो मनुवा प्रजातीलाई आफुले ,यसो एउटा कविता कोर्यो । हैट ! यसले त राष्ट्रिय पुरस्कार जित्न पर्ने जस्तो लाग्छ । यसो मुक्तक बजायो । हैट ! यो त बबालै भो जस्तो लाग्छ । यसो गजल बर्षायो । तुरुक्कै आँसु चुहाउने गरिको मार्मिक लाग्छ । यसो नयाँ युग भन्दै भाषण बजायो, यसो सौच बस्दा गित गुनगुनायो । साला ! आफ्नो कला ,गला र भाषण देखेर आफै तिनछक्क परिन्छ । एकदम असाधारण लागेर आउँछ । हैट ! मैले अहिलेसम्म किन नोबेल पुरस्कार पाईन जस्तो भान हुन्छ । आफुले गरेको कर्म अरुलाई हावा न चावाको लागोस तर आफुलाई अकबरी लाग्छ । कसलाई सुनाउ , कसरी आत्माप्रचार गरौं भनेर नयाँ नयाँ जुक्ती फुर्छ ।
कसैले पत्याएन, वा वा भनेने , आलोचना गर्यो भने , दोहोर्याएर आत्मा समिक्षा गर्न मन लाग्दैन, बरु यो मूर्ख
संसारले प्रतिभाको कदर गर्न जानेकै छैन जस्तो लागी दिन्छ । अनि संसार देखेर दिक्क लाग्छ । बिरक्त लाग्छ । साला नबुझ्ने बुद्धिजीबी नामका महामुर्खहरुलाई थला बसाइ दिउ जस्तो लाग्छ ।
तर जे भएपनि ज्याद्रो जात हो – मनुवा । अरुले नपत्याउदैमा चुपो लागेर बस्दैन यो जात ! बरु आफ्नो प्रतिभाको कदर आफै गर्न थाल्छ । आफ्नो महात्मे आफै फलाक्न थाल्छ । अनि आफैले आफैलाई
खादा लगाई माग्छ र मुसुक्क हाँस्छ । दोसल्ला ओडाई माग्छ र गमक्क फुल्छ । प्रमाणपत्र र तक्मा भिराई माग्छ र मखलेल हुन्छ । अनि गुड गभर्मेन्सको अवार्ड थापेर , अहंकारी मुद्रामा थला पार्ने धम्की दिन्छ । धन्न ! यो नोबेल पुरस्कार भन्ने जिनिस आफैले आफैलाई टक्र्याउन नमिल्ने रहेछ । नत्र हाम्रा सान्तीका दुतले, अस्तिनै आफैले आफैलाई सान्तीका लागि नोबेल पुरस्कार टक्र्याईवरी ,कुम हल्लाई सकेका हुन्थे । कहाँ नोबेल पुरस्कार पाइन र पाउनुपर्छ भन्दै ल्याङल्याङ गरेर बसीरन्थे र !
अब कुरो गरौं मनुवाको विपरीत मनोबिज्ञानको । जसरी मनुवा जातलाई, आफ्ना सानातिना र तुच्छ काम पनि उल्कै महान लाग्छ । त्यसको ठिक बिपरित, आफुले गरेका भंयकर भयंकर गल्ती र अपराध, भ्रष्टाचार र नातावादहरु चाहिँ तुच्छ र साधारण लाग्छ । ७ दिन कब्जियतले ग्रस्त भएको मनुवा प्रजातीलाई आफ्नै उधरवायु नगनाए जस्तो , यीनलाई आफ्नै पाद पनि सुभाषित लाग्छ । आफ्ना गन्धे पादबारे ती अनेक कुतर्क झिकेर त्यसलाई मखमली बनाउन खोज्छन ।
वाईडबडीको कुरो गरम्न । यो वाईडबडी के कसो होला सिरिमान भनेर कसैके सोध्यो भने उत्तर आउदैन । उत्तर दिनपर्ने कुर्षीमा बसेको सिरिमान लाउडा र धमिजाको गन्दे इतिहास कोट्याएर पाद्न थाल्छ । दुर्गन्ध माथी पाद, तपाईं आफै कल्पना गर्नुस वातावरण कस्तो भयो होला ? सिरिमान निर्मलालाई यसो न्याय ……भन्न खोज्यो सिरिमानको सिरि पित्ले ताउलो ताते जसरी तात्छ । साँडेका जस्ता आँखाले खाउला जस्तो गरेर हेर्छन । चुईक्क बोल्दैनन् ।
हे महापुरुष यो यसुकी छोरीको कार्यक्रम …… भनेर भन्यो , गिर्जानी गा हुन । सुशील नि गा हुन । भन्न थाल्छन ।
हैट ! मनुवाले आफ्नो आङको भैंसी देख्दैन भनेको यहि रहेछ । अर्काको आङको जुम्रामाथी लाखौं उखान टुक्का फुराउने दिमागले पनि ,आफ्नो आङको चाहिँ भैंसी पनि नदेख्दो रहेछ । यस्तो बिचित्र बिर्यबाट सिर्जित बिचित्र प्रजातीको मनुवालाई सन्तेको कोटि कोटि प्रणाम । जय हो बिचित्र मनुवा ।